Salaaxida Naasaha iyo Gumeerka Waa Halbowlaha Kacsiga Dumarka(Xog Muhiim ah) | shumis.net
Home » galmada » Salaaxida Naasaha iyo Gumeerka Waa Halbowlaha Kacsiga Dumarka(Xog Muhiim ah)
Waxaa si rasmi loo og yahay Ibta labada naas iyo meesha ku hareersan ee midibkoodu yahay cawl iyo baroor in ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha ,balse waxaa qalad ah in goobahas la kiciyo ka hor inta aan la soo bisleyn jirka intiisa kale .
Sidee haweenka looga raaxeeyaa naasaha?
Waxaa habkaan loo yaqaan ciqaabta loo baahan yahay, waxa uuna ninka uu soo kicinayaa goobaha ku hareersan ee u dhaw labada Ib iyadoo Ibta uu iska indha tirayo , markaasi labada Ib waxa ay u noqanayaan kuwo dareenkooda aad u kacay oo yaa i salaaxa ah gaaray halka gabartana kacsi laba jibaaran ay gaareyso.
Hadaba Sidoo sidee loo kicinayaa dareenka xubinta taranka gabarta , waxaana weli ku guda jiraan marxalada ka horeyso weerarka(labada xubin oo is gala).
Marka si wacan loo soo istiimiyo labada naas oo dareenkooda la soo kiciyo waxaa ninka laga rabaa marka in uu kiciyo oo uu salaaxo caloosha iyo xundhurta iyadoo daabasho tartiib ah lagu salaaxayo lana sii raacsiinayo shumin macaan.
Cilmi ahaan goobtaas waxaa loo yaqaan Goobta Buurta oo xooga baroor ayaa saaran waxaana lagu kiciyaa taabasho adiga oo faraha adeegsanaya adiga oo ka bilaabaya qeybta sare una leexanaya dhanka Kintirka balse ma taabaneysid , waxana ninka markaan laga doonaya in uu adeegsado habka loo yaqaan Ciqaabta Loo Baahan Yahay .
Marka ay dhacaan baashaal ciyaareedkaas ayna haweeneyda u bislaatay weerarka ayaa haboon in ninka ku soo salaamo malabyarowgiisa xubinta ,waxa ayna haweeneyda sidaas loo sameeyo ay heleysaa gariirka galmada siiba marka ay biyaheeda soo dhowaadaan in si fiican loogu niikiyo.
Title: Salaaxida Naasaha iyo Gumeerka Waa Halbowlaha Kacsiga Dumarka(Xog Muhiim ah)